यो त अति भयो प्रधानमन्त्रीज्यू
राजाका सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टमा जम्मा गरेको नेपालका लागि उपयोग होस् भनेर हो । राजाका जग्गाजमिनलाई फेरि व्यक्तिको लुटिखाने उपाय बनाउनु भएछ, यो त अति भयो प्रधानमन्त्रीज्यू । यसरी पनि देशमा सुशासन, समृद्धि र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ ? यो त लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र भएन र ?
यतिबेला नेपाल ट्रष्टको २ हजार १ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई भाडामा दिन मिल्नेगरी कानुन संशोधन गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट छ, भूमाफियाहरु कसरी सरकारलाई प्रभावित पार्न सफल भइसकेका रहेछन् ।
कौडीका भाउमा भाडामा लगाउने र अदृश्य रुपमा कम्बल ओढेर घ्यू खाने दाउपेच सरकारलाई प्रभावित पार्नसक्नेहरुले राम्रैसँग चलखेल गरेछन् । दुई तिहाइको यो हदसम्मको दुरुपयोगले नेकपा भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक बनेको छ ।
नेपाल ट्रष्ट, नेकपाको ट्रष्ट बन्नथाल्यो । हरेक क्षेत्रमा नेकपाकरण गर्ने र राष्ट्रको निर्ममतापूर्वक दोहन गर्ने भनेको अलोकतान्त्रिक तरिका हो । लोकको भलो, लोकको आवाज सुनेर संवोधन गर्ने, लोकअपेक्षा परिपूर्ति गर्नेतिर नेपाल सरकार र नेकपाको दुई तिहाइको बहुमतले बेवास्ता गर्दै गएको छ । यही क्रियाकलाप बढाउँदै जाने हो भने नेकपा देशका लागि सराप बन्नेवाला छ ।
सबैको चाहना थियो, सर्वहारावादी पार्टीले गरिब, सिमान्तकृत जनताको हित हेर्नेछ, राष्ट्रघात हुने दिनेछैन । देशहित र राष्ट्रवादलाई बलियो पार्नेछ । नेकपाको सरकार त सामाजिक बिश्रृंखलता बढाउने तत्व पो साबित हुनथाल्यो । नेकपाको सरकारका हरेक निर्णयहरु देशघातक देखिन थाले । यस्तो होला भनेर सोचेर नेकपालाई जनताले जिताएका होइनन् । नाकावन्दीका बेलामा यिनै केपी ओलीले देशका पक्षमा उभिएकाले स्यावासी भनेर नेकपालाई भोट दिएका थिए । चुनाव जितेर सरकार बनाएको वर्षदिनमै केपी ओली देशको शक्ति हुन छाडेका छन्, देशघातकहरुको संरक्षक बन्न थालेको देखियो । लाग्छ, नेकपाको राजनीतिक भविष्य शायद यही अन्तिम हुनसक्छ । न राज्यकोष सुरक्षित छ, न नेपाल ट्रष्ट अथवा धार्मिक सामाजिक सम्पत्ति सुरक्षित छन् । सबैतिर सेटिङ र लुटलाटले देश कंगाल र अधर्मी, अराजनीतिक अपराधीहरुको किल्ला पो बन्नथाल्यो ।